नेकपाको सचिवालय बैठक आज बस्दै, मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन हुने ? - Nepal Samaj
नेकपाको सचिवालय बैठक आज बस्दै, मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन हुने ?
१ भदौ, २०७७नेपाल समाजअवर्गीकृत
काठमाडौ । बिवादमा परेर फुटको संघारमा पुगेको सत्तरुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक आज बस्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षबाट राजिनामा दिनुपर्ने माग गर्दै बहुुमत सचिवालय तथा स्थायी समिति सदस्यहरुले माग गरेपछि सो पार्टी बिभाजनको संघारमा पुगेको छ ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक बिवाद सतहमा आएपछि पार्टी अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालबीच पार्टीको बिवाद समाधानका लागि महासचिव बिष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बिवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ । बिवाद समाधानकालागि गठन गरिएको कार्यदलको बैधानिकतामाथि नै पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल, झलनाथ खनाल तथा पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रश्न उठाएपछि आज सचिवालयको बैठक बस्दै छ ।
आजको बैठकले उक्त कार्यदललाई बैधानिकता दिने बताइएको छ ।
त्यसैगरी पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनको गृहकार्यअगाडि बढाउनुभएको छ । आगामी एक साताभित्र मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन हुने नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्यले बताएका छन । खासगरी दुई बर्षको अवधिमा पनि राम्रो काम गर्न नसकेका मन्त्रीहरुलाई विदाई गरेर नयाँलाई अवसर दिने ओली र प्रचण्डबीच सहमति भएको बताइएको छ ।